पाथिभरा माताको दर्शन गरी ॐ लेखेर एक SHARE गर्नुस सात दिनभित्रमा तपाइले सोचेको काम बन्नेछ बिल्कुलै बेवास्ता नगर्नुहोला – Naya Kura Daily
September 6, 2020 88
३. सूर्योदयका बेला घरको झ्याल ढोका खुल्ला हुनुपर्छ । यस ले सकारात्मक ऊर्जा घरमा भित्रिन सहयोग गर्छ । यति बेला झ्याल बन्द रहँदा घरका सदस्यले स्वास्थ्य सम्ब न्धि समस्या झेल्नुपर्छ ।
Prevकोरोनाबाट ९ जनाको मृत्यु, ९८० जनामा संक्रमण पुष्टि
Nextशिव लिंगलाई टुक्रा टुक्रा पार्ने यि इन्जिनियरको निधन शिवलिँगलाइ फुटाइएकै स्थानमा बनाइयो शिव मन्दिर दिनकै कैयौं भक्तजन मन्दिरमा जान्छन्
काठमाडौंको त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा कोरोना संक्रमित महिलाको मृत्यु
काठ्माण्डौमा एउटा यस्तो मन्दिर छ, जहाँ मनले चाहेको हरेक कुरा पूरा हुनेगर्छ ॐ लेखेर शेर गर्नुहोस् तपाइले चाहेको कुरा पुरा हुनेछ ॐ
भर्खरै जन्मिएको छोरालाई मार्न अमाजुले यस्तो खेल खेलीन् (3177)
बास्तविकता खुल्यो बिस्कुटको कार्टुनमा भेटिएको बच्चाको ? काठमाडौँमा झाडीभित्र कसले फाल्यो बच्चा(भिडियो) (2134)
धन लाभ हुनुअघि मिल्छन् यस्ता संकेत ॐ लेखी पुरा पढ्नुहोस… (1835)